Archive du 03/04/2012
Telo taona izao no voasazy sy naato tamin'ireo fikambanana iraisam-pirenena rehetra misy azy i Madagasikara, tahaka ny Firenena Mikambana (ONU), ny Vondrona Afrikanina (UA), ny fikambanamben'ny tany mampiasa ny teny Frantsay (OIF), ny SADC, ny vaomieran'ny ranomasimbe indianina (COI).	Hamaky ny tohiny...	Politique
Nanamafy ny fanohanany an�i Marc Ravalomanana
Mitohy ny fitetezam-paritra ataon�ny Vondron'Olon-tsotra Manohana an'i Marc Ravalomanana sy Mitaky ny ara-dal�na (VOT) manao fampitam-baovao sy manazava amin�ny Vahoaka eny ifotony ny toe-draharaham-pirenena, indrindra ny dingan�ny tolona hamerenana ny filoha Marc Ravalomanana an-tanindrazana ka hitondrany indray ny firenena.
Fiarabe mpitatitra entana
Miandry fanapahan-kevitry ny governemanta
Niato tao anaty savorovoro ny fitokonana nataon�ireo fiarabe, maherin�ny 12 taonina, mpitatitra entana teny Ambohimangakely omaly.
Hihatra amin�izay ilay fisondrotan-karama 10,83%
Mihatra amin�ny fandraisan-karama volana martsa ity ilay fisondrotan-karama 10,83% farafahakeliny ho an�ireo mpiasa eny anivon�ny orinasa tsy miankina tafiditra ao anatin�ny sehatra ara-dal�na.
Mangoron-karena aty Afrika
Mahoraka any ivelany any, ary taterin�ny tranokala lexpansion.lexpress.fr fa dia nety tsara mihitsy ny asan�ny orinasa frantsay mandraharaha amin�ny solika, taty Afrika, tsy iza izany fa ny Total.
Tsy mivaky loha
Nambara teto tamin�ny herinandro lasa iny fa misy antony manokana matoa nisafidy an�i Manakara hanatanterahana ny lanonana ofisialy amin�ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin�ny 29 martsa 1947 ny fitondrana tetezamita, ary dia tonga nanao rodobe tany an-toerana i Andry Rajoelina sy ireo mpanao politika manohana azy.